Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Otu esi eme atụmatụ ma nwalee ngwa maka ichu nta azụ azụ gị?
Ndị na-achụ nta na-amabukarị ka ọ ga-esi na-akpali agụụ mmekọahụ, Otú ọ dị, ịchụ nta n'ugwu n'ebe ìgwè mmadụ ahụ nọ pụrụ ọbụna na-amasi ike karị. Ịchụ nta azụ na-achọ nnukwu ike na ndidi iji tinye akpa egwuregwu nrọ gị. Na mgbakwunye, ọ na-achọkwa ka dinta kpebie ma ha chọrọ ịnya azụ azụ, soro ịnyịnya ibu ma ọ bụ ịnyịnya ma ọ bụ ọbụna kwaga ogige ha site n'otu ebe gaa n'ọzọ. Ọ bụ ezie na ha niile nwere ike ịdị ka ihe na-akụda mmụọ, ọ nwere ike inye gị ọtụtụ ahụmịhe na ihe ncheta agaghị echefu echefu. Ya mere, ntuziaka a zuru oke ga-akọwara gị otu esi eme atụmatụ na nwalee akụrụngwa ịchụ nta azụ azụ gị. Nọgide na-agụ!
Na-eme atụmatụ ngwa ịchụ nta azụ gị
Ị nwere ike na-enwe mmetụta nke ukwuu ugbu a ma nwee ike iche na ọ dị gị mkpa iburu ihe ọ bụla n'ime gị gaa n'ugwu. Nke ahụ abụghị eziokwu. Enwere ihe ole na ole dị mkpa iji mee ka njem gị gaa nke ọma. Detuo ihe eji achọ ihe ndị a:
Mgbe ị na-aga ịchụ nta azụ azụ, akpa azụ gị ga-abụ ezigbo enyi gị mana ọ nwekwara ike bụrụ nke ọzọ ma ọ bụrụ na ị họrọghị nke ziri ezi maka gị. Ịkwesịrị ịzụta akpa azu paaki dị fechaa nke ukwuu iji gbochie nhụsianya n'azụ ma ọ bụ ubu gị.
Ka obere akpa azụ azụ, ka ha na-adịkwu ọnụ. Ma ọ bụrụ na ị na-eche ya dị ka ntinye ego nke otu oge, ọ ga-aba uru ego ahụ. Ị ghaghị ijide n'aka na ọ nwere ike iburu ihe gị niile n'ụzọ dị mfe, yabụ, ị ga-akwadorịrị ikike ya tupu ịzụrụ.
Ọ dị mma ịnweta akpa azu nwere ọtụtụ akụkụ na zippers iji hụ na ị nwere ike wepụta ihe ọ bụla ịchọrọ ngwa ngwa mgbe ị na-achụ nta.
Oge ehihie na nke abalị nwere ike ịdịgasị iche n'ugwu ma ịkwesịrị ịkwanye uwe gị n'ihi ya. Ọ dịkwa mma ịlele ihu igwe nke mpaghara ị ga-aga n'ihi na ọ ga-enyere gị aka ịhazi atụmatụ nke ọma.
N'ozuzu, ị kwesịrị iburu n'uche na uwe gị ekwesịghị ịbụ nke owu, n'ihi na ọ na-amịkọrọ ọsụsọ na mmiri. Dịka ọsụsọ na-agba gị nke ukwuu mgbe ị na-eme njem, ọ ka mma ịnweta polyester ma ọ bụ akwa ọ bụla ọzọ nwere ihe na-emebi mmiri.
Ị ga-edowekwa uwe ndị ọzọ n'ihi na ọ nwere ike ịjụ oyi n'abalị. Maka akpụkpọ ụkwụ, ị ga-etinyerịrị ego na akpụkpọ ụkwụ na-adịgide adịgide ma dị mma na nke dị arọ, n'ihi na ịchọghị blisters n'ụkwụ gị ka ị na-aga kilomita na ala na-enweghị isi.
Ọzọ, akpụkpọ ụkwụ dị otú ahụ nwere ike na-eri gị ihe karịrị $200, ma ọ ga-aba uru. I kwesịkwara izere igbe mkpịsị ụkwụ na-adịghị mma n'ihi na ha ga-egbochi ịgbasa ọbara.
Ebe ị na-ehi ụra kwesịrị ịdị ntụsara ahụ dị ka o kwere mee ka ị nwetaghachi ahụ gị ma nwee ike ịchụ nta ọtụtụ awa n'ụbọchị nke ọzọ n'ọnọdụ siri ike.
Mgbe ị ga-eme atụmatụ ịzụta akpa ụra, ịkwesịrị iburu n'uche ihe a ga-eji mee ya, n'ihi na ọ ga-enwe ike iguzogide elu ugwu.
Na mgbakwunye na nke a, ọ ka mma ịnweta akpa mmiri na-ekpuchi mmiri na pad dị arọ dị arọ maka nkasi obi kachasị na ogologo ndụ.
Mgbe ị na-achụ nta n'Ugwu Rocky, ị chọghị ịrịgo awa abụọ ọzọ na-adabere na "echiche" gị siri ike na ị hụla nnukwu elk. Ọ bụ ya mere ị ga-eji hazie ngwa anya gị yana ịchụ nta azụ azụ.
Ịkwesịrị itinye ego na binoculars dị elu nke ọma, n'ihi na ha ga-enye gị ohere ịhụ nso nso na-emefusịghị oge na mbọ gị. Tinyere nke a, itinye ego na rangefinder nwekwara ike inyere gị aka gbakọọ anya, ka ị nwee ike ịhazi njem gị nke ọma.
Ihe abụọ a agaghị ewe nnukwu ohere n'ime akpa gị, ha adịghịkwa oke arọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chere na ọ dị mkpa ka gị na gị na-akpakọrịta, ị kwesịrị iburu n'uche na ọ nwere ike ịdị arọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-aga n'ìgwè ma ọ bụ onye gị na ya na-achụ nta, ịkekọrịta ya ga-abụ nhọrọ dị mma karị.
Na-anwale ngwa ịchụ nta azụ azụ gị
Enweela ọtụtụ ahụmahụ na ndị na-achụ nta mgbe ha nwetara ngwa niile nke mbụ maka nnukwu njem ha na-ejedebe na ngwa agbajiri agbaji mgbe ha na-achụ nta. Ọ nwere ike bụrụ ahụmịhe na-adịghị mma, yabụ, ị ga-anwale ngwa gị niile nke ọma tupu ị pụọ maka ịchụ nta.
Ị ga-elele ma ọ dị mkpa ka edochie batrị nke ọkụ ọkụ gị ma ọ bụ GPS gị na-arụ ọrụ nke ọma. I kwesịkwara ịnwale akpa azụ gị wee chọpụta ma ọ dabara ihe niile n'ụzọ ziri ezi, ma ị nwere ike iburu ibu ahụ nke ọma. N'otu aka ahụ, ị ​​ga-enyocharịrị ngwa gị nke ọma.
Ọzọkwa, ị ga-ahụrịrị na ụlọikwuu gị dị n'ọnọdụ dị mma, ma ị nwere ike ịnwale ya site na ịtọ ya n'azụ ụlọ gị ma ọ bụ soro ndị enyi gị gaa njem dị mkpirikpi na izu ụka. Nke a ga-enye gị ohere ịlele ma ọ chọrọ nnọchi ma ọ bụ rụkwaa ya, kama imebi njem ịchụ nta azụ gị.
Nimrah Shiekh ekwu, sị:
Jenụwarị 15, 2022 na 19:55
Daalụ & ekele